SAWIRRO XUL AH: Jeenyo oo guul ka gaartay kooxda Banaadir – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Jeenyo oo guul ka gaartay kooxda Banaadir
jilacow September 30, 2016
(Muqdisho) 30 Sebt 2016.Kooxda Banaadir ayaa guuldarro kala kullantay naadiga Jeenyo ciyaar ka tirsan koobka Janeraal Daa’uud oo galabta ka dhacday garoonka Koonis.
Kullanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana u soo daawasho tagay taageerayaal dhowr ah, iyadoo kooxda Banaadir ay noqotay naadigii saddexaad ee laga badiyo xilli ciyaareedkaan koobka Janeraal Daa’uud.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-0, oo ay ku hoggaamineyso naadiga Jeenyo waxaa billisoon u dhaliyay xiddiga lambarka 8’aad ee Xasan Cabdi Nuur Geeseey.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta, labada kooxood ayaa ku dhawaaday in ay goolal iska dhaliyaan balse waqtigii loogu tala galay ciyaarta waxa ay kusoo dhamaatay 1-0.
Kooxda Jeenyo ayaa markeedii lixaad ka badisay kooxda Banaadir, waxaana guushaan ay imaaneysaa xilli kooxda Banaadir ay ka maqnaayeen xiddigo muhiim ah oo ay qeyb ka yihiin Maxwell, C/risaaq Cali iyo Gacal .
Sikastaba Guruubka D, waxaa iminka hoggaankiisa qabatay naadiga Jeenyo mahadaama ay badisay kullankeedii ugu horeeyay sanadkaan koobka Janeraal Daa’uud.
Arjen Robben oo Qandaraaska u kordhinaya kooxdiisa Bayern Munich
Tababaraha Faransiiska oo booskii Mathieu ee xulka ku beddelay Eliaquim Mangala